Xeerarka Websaydhka - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Adoo isticmaalaya degelkan waxaad ku saxeexaysaa oggolaanshahaaga shuruudaha adeegsiga. Fadlan si taxaddar leh u akhri intaadan isticmaalin boggan. Xarunta Daryeelka Naafada iyo Naafada ee Degmada Brown (ADRC) waxay dib u eegi kartaa oo cusbooneysiin kartaa Shuruudahaan Adeegsiga waqti kasta. Isticmaalkaada sii socota ee boggan waxay ka dhigan tahay inaad aqbasho isbedeladaas.
Boggan ayaa bixiya macluumaad guud oo keliya
ADRC ee deggaanka degmadda Brown waxaa loogu talagalay macluumaad guud oo keliya. Maaha in lagu tiirsanaado badal ahaan la-tashiga xirfadlayaal aqoon u leh oo aqoonta u leh baahiyahaaga shaqsiyeed.
Macluumaadka waxaa loo bixiyaa si xushmad leh Xarunta Adeegyada Gabowga iyo Naafada. Macluumaadka ay soo saartay ADRC waa la soo saari karaa ilaa iyo inta amaahda wakaaladda iyo / ama hay'adaha kale ee la xusay la hayo oo qaybinta loogu talagalay ujeeddooyin aan ganacsi ahayn oo keliya. Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir ADRC, 920-448-4300, bc.adrc@browncountywi.gov
Xiriirinta bogagga kale
ADRC mas'uul kama ahan waxa ku jira boggaga saddexaad ee lala xiriiriyo umana yeeleyso wax matail ah oo ku saabsan waxa ku jira ama sax ahaanshahooda. Isticmaalka websaydhyada dhinac saddexaad ayaa leh adiga laftaada oo ku xiran shuruudaha iyo shuruudaha adeegsiga goobahaas.
Oggolaanshuhu kama tarjumayso ama ma qaatay
ADRC waa ilo macluumaad aan loo eexan. ADRC ma aqbali karto mana ku talin karto urur, wax soo saar, ama adeeg. Websaydhkani wuxuu ku siiyaa xiriiriyeyaal degello internetyo kale oo aan hoostagin maamulka ADRC. Xidhiidhyada waxaa loo bixiyaa si ku habboon tixraac oo keliya mana loogu talagalay in lagu oggolaado ADRC ee ururka ama hawlgallada shaqsi ee websaydhka martigelinta ama damaanad qaad nooc kasta oo ku saabsan websaydhka martida loo yahay ama macluumaadka ku jira websaydhka martida loo yahay.
Iyadoo la raacayo Qaanuunka Gobolka 51.05 (5), qofna looma diidi doono adeegyo ama laguma takoori doono diin, da ', jinsi, jinsi, naafonimo, xaalad jireed, u janjeedh galmo ama naafonimo koritaan. Macluumaadka la xiriira sharciga socdaalka looma gudbin doono wakaaladaha kale ee federaalka loomana adeegsan doono in lagu takooro. Waa siyaasada hay'adu inay siiso adeegyo luqad helida dadka leh Xirfadda Ingiriisiga Xaddidan ee u qalma inay u adeegaan barnaamijyadeenna. U waafajin macquul ah ayaa loo sameyn doonaa naafonimada iyadoo la raacayo Sharciga Naafada Mareykanka.
Haddii hoy loo baahan yahay, fadlan kala xiriir ADRC taleefanka: (920) 448-4300, TTY: WI Relay 711, ama emayl bc.adrc@browncountywi.gov,
ugu yaraan 5 maalmood kahor baahida gurigaas.
Qiimaha Barnaamijka iyo Maalgelinta
Qaar ka mid ah barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa qaab ku saleysan tabaruc iyada oo badanaaba aan qofka wax qiimo ah ugu fadhin. Inkasta oo qayb ka mid ah maalgelinta ay bixiso ilaha federaalka, gobolka, iyo degmada, tabarucaadka gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale qayb muhiim ah ka ah miisaaniyadda Xarunta Agabka & Naafada oo si weyn ayaa loogu mahadceliyaa.
Tag tan Taageer ADRC inaad baratid sidaad ugu biiri karto kuwa kale ee ka go'an xoojinta iyo kobcinta nolosha dadka waaweyn, naafada, iyo daryeel bixiyaasha.
Qoraalka Qarsoodiga Download
Asturnaantaada annaga ayaa muhiim noo ah. Ogeysiiskaani wuxuu sharxayaa sida macluumaadkaaga loo istcimaali karo loona kashifi karo iyo sida aad u heli karto macluumaadkan.
Xuquuqda & Mas'uuliyadaha Macaamiisha Download
Wuxuu sharraxayaa xuquuqda iyo waajibaadka macaamiisha ka ganacsata ADRC.
Geeddi-socodka Cabashada Download
Wuxuu kuu macnayn doonaa xuquuqda aad leedahay xereynta cabashada ama rafcaanka wuxuuna sharaxaa nidaamka.
Midkoodna ADRC ee Degmada Brown, ama guddigeeda ama shaqaalaheeda mas'uul kama noqon doonaan wixii khaldan ama khaldan ee loo adeegsado macluumaadka lagu sharraxay iyo / ama halkan ku jira mana qaadayaan wax mas'uuliyad ah isticmaalka qofna u adeegsado macluumaadka, mana aha inay dusha saaraan wax toos ah, mid aan toos ahayn, shil ah, tusaale qaas ah, ama waxyeelooyin la taaban karo (oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, soo iibinta alaab ama adeegyo beddel ah; luminta adeegsiga, xogta, ama macaashka; ama carqaladeynta ganacsiga) si kastaba ha noqotee waa lacag iyo aragti kasta oo mas'uuliyad ah, ha ahaato qandaraas , mas'uuliyad adag, ama jirdil (oo ay kujirto dayacaad ama si kale) oo kadhasha qaab kasta oo looga baxo isticmaalka nidaamkan, xitaa haddii lagula taliyo suurtagalnimada waxyeeladaas. Diidmada masuuliyadeed waxay khusaysaa waxyeello ama dhaawac kasta, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn kuwa ay sababeen waxqabad la'aan wax qabad, qalad, ka gaabis ah, hakad, tirtir, cillad, dib u dhac ku yimid hawlgalka ama gudbinta, fayraska kombiyuutarka, khadka khadka isgaarsiinta oo xumaada, xatooyo ama burburin ama marin u helid aan la fasaxin, bedelida ama isticmaalka diiwaanka, ha ahaato jebinta qandaraaska, anshax xumo, dayacaad ama sababo kale oo ficil ah.
Xogta la aruuriyay iyo sida loo istcimaalo
Markaad booqato adrcofbrowncounty.org, ADRC waxay aruurin doontaa xogta guud ee internetka, oo ay kujiraan boggeena mareegtada aad booqatay, halka laga helayo isku xir bannaanka bartayada haddii aad isticmaashay mid, waxaana laga yaabaa inaan ku keydinno "cookie" kombiyuutarkaaga si aan u xusuusano xogta marka xigta ee aad booqato goobta. Kukiyada waxaa ku jira qaddar yar oo macluumaad ah oo u oggolaanaya server-yadayada shabakadda inay ku aqoonsadaan markasta oo aad booqato. Kukiyada waa la hayaa si aan xad lahayn si marka xigta ee aad soo noqoto aan kuu aqoonsan karno oo aan kuugu habayn karno goobta. Waxaan u adeegsannaa cookies si aan u fududeyno macaamilada waxaad dooran kartaa inaad ku dhammaystirto boggayaga internetka sida foomamka khadka tooska ah, diiwaangelinta, codsiyada macluumaadka ama kaqeybgalka barnaamijyada iyo adeegyada kale ee lagu bixiyo websaydhadeena. ADRC kama uruuriso mana hayso macluumaadka aqoonsiga shaqsi ahaaneed adeegsadayaasha degelkeena illaa booqde degelku doorto inuu ku buuxiyo foom goobta looga baahan yahay macluumaadka noocaas ah. Boggeena waxaa martigeliya shirkad dhinac saddexaad ah oo aruurin karta macluumaadka sida cinwaanka IP-ga ee kombuyuutarkaaga iyo macluumaadka ku saabsan bogagga aad booqatay. Waxaan sidoo kale adeegsanaa softiweer falanqeyn ah oo aruuriya macluumaadka qarsoodiga ah ee ku saabsan waxa boggaga ku yaal degelkeenna la soo booqday iyo waxqabadkaaga boggayaga ayaa lagu dari doonaa xogtan.
Macluumaadka aad Bixiso
Markaad bixiso macluumaadka, foomamka onlaynka ah, emaylka, ama haddii kale macluumaadka aad noo soo dirto, waxaan u isticmaali karnaa sababo kala duwan, sida inaan kugu diiwaangelino fasal ama dalabkaaga adeeg. Haddii aadan rabin inaad ku bixiso macluumaadkan qaab dijitaal ah, fadlan kala xiriir ADRC lambarka 920-448-4300. ADRC waxay u hogaansantaa xayiraadaha sharci dajinta iyo sharciyeynta ee laxiriira cinwaanada emaylka mana la wadaagto cinwaanka emaylkaaga hay'ad kale ogolaansho la'aan.
Iibiyaasha kaararka deynta ee ADRC ayaa adeegsada sirta heerka-warshadaha si ay u ilaaliyaan macluumaadka macaamiisha iyo asturnaanta markay aqbalaan kaararka amaahda ama kaarka deynta. ADRC waxay u isticmaashaa 'Pay Pal' habka tooska ah ee bixinta kaararka elektiroonigga ah oo lagu socodsiiyo xiriir qarsoon. ADRC ma hayaan wax macluumaad ah oo ku saabsan kaarkaaga deynta.